VIRTUALBOX ANAGHỊ AMALITE - VIRTUALBOX - 2019
The VirtualBox toolkit bụ ike, ma ọ nwere ike ịkwụsị na-agba ọsọ n'ihi ụfọdụ ihe, ọ bụ na-ezighị ezi ọrụ ma ọ bụ melite nke sistemụ na igwe ụlọ ọrụ.
Mmalite Mmalite Mebere VirtualBox: akpata akpata
Ihe dị iche iche nwere ike imetụta ọrụ nke software VirtualBox. O nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ na-ebido n'enweghị nsogbu ọ bụla n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụ n'oge esiri nwụnye.
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ na-eche eziokwu na ha enweghị ike ịmalite igwemịghe igwe, mgbe VirtualBox Manager n'onwe ya na-arụ ọrụ dika ọ dị na mbụ. Ma n'ọnọdụ ụfọdụ, windo n'onwe ya adịghị amalite, na-enye gị ohere ịmepụta na jikwaa igwe arụmọrụ.
Ka anyị chọpụta otu esi edozi njehie ndị a.
Ọnọdụ 1: Enweghi ike ịrụ mmalite mmalite nke igwe arụmọrụ
Nsogbu: Mgbe echichi nke VirtualBox mmemme ya na ihe okike nke igwe na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ oge nhazi usoro ọrụ. Ọ na - emekarị na mgbe ị na - agbalị ịmalite igwe ejiji oge mbụ i nwetara njehie a:
"Akụrụngwa ngwa ngwa (VT-x / AMD-V) anaghị adị na sistemụ gị."
N'otu oge ahụ, sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ na VirtualBox nwere ike ịgba ọsọ ma rụọ ọrụ na-enweghị nsogbu, a ga-ezute ụdị njehie a site n'ụbọchị mbụ nke iji VirtualBox.
Ngwọta: Ị ghaghị ime ka atụmatụ BIOS Virtualization Support.
Malitegharia PC, ma na mmalite, pịa igodo ntinye BIOS.
Ụzọ maka onyinye BIOS: Atụmatụ BIOS dị elu - Technology Virtualization (na nsụgharị ụfọdụ, a na-eme ka aha ahụ dị mkpụmkpụ Nje Virtualization);
Ụzọ maka AMI BIOS: Di elu - Intel (R) VT maka eduzi I / O (ma ọ bụ naanị Nje Virtualization);
Ụzọ maka ASUS UEFI: Di elu - Nyocha Igwe Nyocha Virus.
Maka BIOS ndị na-abụghị nke a, ụzọ nwere ike ịdị iche:
Nhazi usoro - Technology Virtualization;
Nhazi - Intel Mebere Technology;
Di elu - Nje Virtualization;
Di elu - Nhazi usoro CPU - Ịnọ ná Ntụkwasị Obi Mebere Ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ịchọtaghị ntọala maka ụzọ ndị ahụ dị n'elu, gaa na ngalaba BIOS ma chọpụta na ị ga-achọpụta ihe kachasị mkpa maka ịmalite ime ihe. Aha ya kwesịrị ịgụnye otu n'ime okwu ndị a: mebere, VT, ịmalite ịlụ.
Iji mee ka ọ bụrụ na ị na-ejikọta onwe gị, setịpụ nhazi ahụ Kwadoro (Kwadoro).
Echefula ịchekwa ntọala ahọrọ.
Mgbe ịmalitere kọmputa, gaa na ntọala nke Virtual Machine.
Pịa taabụ "Usoro" - "Ọganihu" ma lee igbe dị n'akụkụ "Kwado VT-x / AMD-V".
Tụgharịa na mebere igwe ma malite nhazi nke OS os.
Ọnọdụ 2: Onye ọrụ VirtualBox amaliteghị
Nsogbu: The VirtualBox Manager anaghị aza mbido, ma ọ bụ na ọ na-enye ọ bụla njehie. Ọ bụrụ na ileba anya "Onye na-ele ihe omume", mgbe ahụ i nwere ike ịhụ na e nwere ihe ndekọ na-egosi mmeghe mmeghe.
Ngwọta: Na-atụgharị azụ, na-emelite ma ọ bụ reinstalling VirtualBox.
Ọ bụrụ na mbipute nke VirtualBox bụ oge ochie ma ọ bụ arụnyere / emelitere na njehie, ọ zuru ezu iji weghachite ya. Ngwaọrụ arụmọrụ na arụmọrụ OS ga-adanyeghị ebe ọ bụla.
Ụzọ kachasị mfe bụ iji weghachite ma ọ bụ hichapụ VirtualBox site na faịlụ nwụnye. Gbaa ya, ma họrọ:
Ndozi - mgbazi nke njehie na nsogbu n'ihi na VirtualBox anaghị arụ ọrụ;
Wepu - mwepụ nke VirtualBox Manager mgbe idozi anaghị enyere aka.
N'ọnọdụ ụfọdụ, nsụgharị ụfọdụ nke VirtualBox jụrụ ajụ ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na nhazi nke PC. E nwere ụzọ abụọ si:
Chere maka mbipụta ọhụrụ nke usoro ihe omume ahụ. Lelee weebụsaịtị website na webpage www.virtualbox.org ma nọrọ na-ege ntị.
Ggharịa na ochie version. Iji mee nke a, buru ụzọ wepụ mbipute ugbu a. Enwere ike ime nke a n'ụzọ dị n'elu, ma ọ bụ site "Tinye ma ọ bụ Wepụ Mmemme" na windo.
Echefukwala nchekwa nchekwa dị mkpa.
Gbaa faịlụ ahụ echichi ma ọ bụ budata usoro ochie ahụ site na saịtị ọrụ ahụ site na njikọ a na ntọala ndị echekwara.
Ọnọdụ 3: VirtualBox anaghị amalite mgbe os melite
Nsogbu: N'ihi nsonaazụ ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ VB Manager anaghị emepe ma ọ bụ na ọghị amalite igwe kwadoro.
Ngwọta: Na-eche maka mmelite ọhụrụ.
Enwere ike ịmeghari usoro sistemụ ma ghọọ ihe nkwekọ na nsụgharị nke VirtualBox ugbu a. Dịka, na ndị dị otú ahụ, ndị mmepe na-ahapụ mmelite ozugbo na VirtualBox, na-ewepụ nsogbu dị otú ahụ.
Ọnọdụ 4: Ụfọdụ igwe arụmọrụ adịghị amalite
Nsogbu: mgbe ị na-agbalị ịmalite ụfọdụ ngwaọrụ arụmọrụ, njehie ma ọ bụ BSOD na-egosi.
Ngwọta: Gbanyụọ Hyper-V.
Ụlọ ọrụ a na - ejikọta ya na mbido nke ụlọ ọrụ ahụ.
Meghee "Iwu iwu" n'ihi onye nchịkwa.
bcdedit / setịpụrụ hypervisorlaunchtype
wee pịa Tinye.
Ọnọdụ 5: Njehie na ọkwọ ụgbọala kernel
Nsogbu: Mgbe ị na-agbalị ịmalite igwe arụmọrụ, njehie gosiri:
"Enweghị ike ịnweta ọkwọ ụgbọala kernel! Jide n'aka na ejirila ọfụma zọlitere kernel modul."
Ngwọta: weghachite ma ọ bụ melite VirtualBox.
Ị nwere ike reinstall mbipụta nke ugbu a ma ọ bụ kwalite VirtualBox ka ọ rụọ ọrụ ọhụrụ iji usoro ahụ akọwapụtara na "Ọnọdụ 2".
Nsogbu: Kama ịmalite igwe site os (OS nke Linux), njehie gosiri:
"Ọkwọ ụgbọ ala adịghị arụnyere".
Ngwọta: Gbanyụọ Boot Nchekwa.
Ndị ọrụ na UEFI kama Award ma ọ bụ AMI BIOS nwere njirimara Secure Boot. Ọ na-amachibido nkedo nke sistemụ arụ ọrụ na ngwanrọ n'enweghị ikike.
N'oge buutu, pịa igodo iji banye BIOS.
Ụzọ maka ASUS:
Buut - Ịkwado buut - Os Ụdị - Ndị ọzọ OS.
Buut - Ịkwado buut - Onye nkwarụ.
Nche - Ịkwado buut - Onye nkwarụ.
Ụzọ maka HP: Nhazi usoro - Ntughari nhọrọ - Ịkwado buut - Dsabled.
Ụzọ maka Acer: Nyocha - Ịkwado buut - Onye nkwarụ.
Di elu - Nhazi usoro - Ịkwado buut - Onye nkwarụ.
Ọ bụrụ na ị nwere laptọọpụ Acer, mgbe ahụ ịkwụsị ọnọdụ a agaghị arụ ọrụ.
Akpa gaa na taabụ Ncheeji Chekwaa Paswọdu Nyocha, debe paswọọdụ, wee gbalịa gbanyụọ Ịkwado buut.
N'ọnọdụ ụfọdụ ọ nwere ike ịdị mkpa iji gbanwee EUFI na CSM ma Ụdị legacy.
Ụzọ maka Dell: Buut - EUFI Boot - Onye nkwarụ.
Ụzọ maka Gigabyte: Atụmatụ BIOS - Ịkwado buut -Gbanyụọ.
Ụzọ maka Lenovo na Toshiba: Nche - Ịkwado buut - Onye nkwarụ.
Ọnọdụ nke isii: Igodo nke mmekọrịta gbasara UEFI malitere kama kama igwe igwe
Nsogbu: Os os os os ogh i amalite, na njikwa ihe omume na-egosi kama.
Ngwọta: Gbanwee ntọala nke ụlọ ọrụ kwadoro.
Mwepụta VB Manager na oghe mebere igwe ntọala.
Pịa taabụ "Usoro" ma lee igbe dị n'akụkụ "Kwado EFI (OS naanị)".
Ọ bụrụ na ọ nweghị ngwọta enyerela gị aka, wepụ ihe na ozi banyere nsogbu ahụ, anyị ga-anwa inyere gị aka.